Iyadoo Maanka Ku Haysa Guuldaradii Ka Soo Gaadhay Kooxda Real Sociedad Ayaa Kooxda Real Madrid Guul Ka Gaadhay Kooxda Osasuna. | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Iyadoo Maanka Ku Haysa Guuldaradii Ka Soo Gaadhay Kooxda Real Sociedad Ayaa Kooxda Real Madrid Guul Ka Gaadhay Kooxda Osasuna.
Kooxda Real Madrid ayaa guul muhiim ah oo soo laabasho ah ka soo gaadhay kooxda Osasuna oo gool kaga hormartay waxayna Los Blancos ka soo kabsatay guuldaradii cuslayd ee ay Copa Del Rey kaga hadhay kulankii Real Sociedad.
Waxaa Real Madrid guushan ku soo hogaamiyay Isco oo goolka barbaraha u keenay, Sergio Ramos oo goolka labaad hogaanka Madrid ugu dhiibay isla qaybtii hore laakiin Karim Benzema ayaa dhamaadkii ciyaarta Madrid u keenay goolka saddexaad ee ay Osasuna sida dhabta ah ugu quusatay.
Real Madrid ayaa markale lix dhibcood ku sii qabtay hogaanka La Liga ka hor kulanka adag ee ay Barcelona ay caawa la ciyaari doonto kooxda ay dhibaatada badan kala soo kulmaysay ee Real Betis oo Setien dhawaan ka soo wareegay.
Laakiin intii lagu jiray daqiiqadihii dheeriga ahaa ee dhamaadka ciyaarta waxaa goolka afraad ee Madrid ciyaarta ku soo xidhay Luka Jovic, waxayna Madrid guushan wayn ku soo gaadhay 4-1 inkasta oo goolka looga hor maray.
Zinedine Zidane ayaa ciyaartoyda kooxdiisa Madrid ka dalbaday in ay jawaab ka bixiyaan guuldaradii xanuunka badnayd ee Bernabeu ay kala kulmeen kooxda Real Sociedad ee looga soo reebay Copa Del Rey.
Waxa uu Zidane oo shaxdiisa dib ugu soo celiyay Gareth Bale iyo Luka Modric uu doonayay in ayna qalad kale kooxdiisu samayn oo ayna iska khasaarin dhibcaha ay hogaanka La Liga ku hayeen.
Laakiin kooxda Osasuna ayaa Real Madrid kaga naxsatay goolka furitaanka kadib markii uu daqiiqadii 14 aad goolkan u saxiixay Unai García kaas oo caawin ka helay Rubén García waxayna ciyaartu noqotay 1-0 ay Osasuna hogaanka si lama filaan ah ugu qabtay.
Laakiin jawaabta Real Madrid ayaa noqotay mid ayna Osasuna hogaanka u sii adkaysan karin waxayna Los Blancos qaaday weeraro isdaba joog ah si ay ciyaarta ugu soo laabto.
Daqiiqadii 33 aad ayay Real Madrid ciyaarta ku soo laabtay kadib markii uu Isco gool qurux badan ku dhaliyay kubbad uu markii hore Gareth Bale isku dayay in uu gool ku dhaliyo balse laga daboolay, wuxuuna Isco ciyaarta ka dhigay barbaro 1-1 ah.
Laakiin daqiiqadii 38 aad Sergio Ramos ayaa kooxdiisa Real Madrid ka caawiyay in ay gabi ahaanba dhinaca kale u dhigtay natiijadii ciyaarta ee goolka looga hor maray kadib markii uu caawin ka helay Casemiro isla markaana uu dhaliyay goolka labaad ee Madrid.
Goolkan ayaa sabab u noqday in Real Madrid ay qaybtii hore ee ciyaarta soo natay iyada oo 2-1 hogaanka ciyaarta ku haysay balse kooxda Osasuna ayaa wali raadinaysay qaabkii ay markeeda u soo laaban lahayd.
Kooxda Osasuna ayaa qaybtii labaad ee ciyaarta dadaal badan ku bixisay sidii ay goolka labaad ee barbaraha u keensan lahayd laakiin Madrid oo qorshaheedu ahaa in ay goolka saddexaad ciyaraarta ku dhisho ayaa taxadar muujinaysay.
Daqiiqadii 71 aad Zidane ayaa ciyaarta ka saaray Gareth Bale wuxuuna kaydka ka soo kiciyay Lucas Vázquez halka Osasuna ay dhawr isbadal shaxdooda ku sameeyeen.
Ciyaarta ayaa noqotay mid aan isbadal lahayn waxayna taasi keentay in daqiiqadii 82 aad uu Zidane kaydka uga yeedhay da’yarka Vinícius Júnior wuxuuna saaray xidiga goolkii furitaanka dhaliyay ee Isco.
Daqiiqadii 84 aad Karim Benzema ayaa si rasmi ah Real Madrid ugu xaqiijiyay saddexda dhibcood kadib markii uu goolka saddexaad ee Madrid ku dhaliyay kubbad caawin uu ka helay Lucas Vazguez oo ciyaarta badal ku soo galay.
Ciyaarta ayaa noqotay 3-1 ay Madrid ku niyadjabisay kooxdii goolka kaga hor martay ee Osasuna wuxuuna goolkani noqday kan rajadii Osasuna ee soo laabashada ay ku doonayeen burburiyay.
Daqiiqadii 92 aad ee dhamaadkii ciyaarta waxaa goolka afraad ee Madrid ciyaarta ku soo xidhay Luka Jović kaas oo caawin ka helay Valverde waxayna ciyaartu ku dhamaatay 4-1 ay Madrid ku xasuuqday Osasuna oo gool ku hor martay.
Napoli to sell two players
Sharciga Cusub Ee Champions League Soo Saaray Oo Ka Farxiyey Man United Halka Kooxahan Ay Murugo Galeen?